स्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दा पनि प्रहरीले निर्मम कुटिरहे ! - DURBAR TIMES
HomeHealthस्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दा पनि प्रहरीले निर्मम कुटिरहे !
स्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दा पनि प्रहरीले निर्मम कुटिरहे !
म कोशी अस्पतालमा कार्यरत सिनिएर अहेव हुँ । ‘ओटि टेक्निसिएन’का रुपमा कार्यरत छु। म मंगलबार राति ९:३० बजे डिउटी सकेर घर फर्किरहेको थिए। म बाइकमा सवार थिए। देवकोटा चोकमा पुग्दै लाग्दा टाढैबाट प्रहरीले लौरो देखाउँदै रोक्ने इसारा गर्नु भयो। रात सुनसान थियो। मैले प्रहरी नजिकै पुगेर बाइक रोके। रोक्न नपाउँदै मेरो बाँया खुट्टामा एक जनाले लौरो बजार्नु भयो ।
पछि दुई जना प्रहरीले दुबै खुट्टामा बजार्न थाल्नुभयो। मैले म स्वास्थ्यकर्मी भन्न नपाउँदै कुटपिट भयो। घाँटीमा कार्ड पनि थियो। मैले स्वास्थ्यकर्मी हो भनिरहे। उहाँहरूले कुरै सुन्नु भएन। कुटेको कुटेइ गर्नुभयो ।
एक जना महिला सुरक्षाकर्मीले उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हो नकुट्नुस् भन्दा पनि मान्नु भएन । स्वास्थ्यकर्मी भन्दा झन कुट्नुभयो। कुटाइबाट ढाडमा धेरै चोट लाग्यो। पेट, घुँडा, खुट्टामा पनि चोट लागेको छ ।
कुटपिट भएपछि सहकर्मी डा. रुपेश गामीलाई फोन गरे । आफूमाथि भएको घटना बताए। उहाँले अस्पतालमा बोलाउनु भयो। त्यहीबाट कोशी अस्पताल फर्केर गएँ। फर्किदा फेरि कुटाइ खाने डरले अर्कै बाटो प्रयोग गरेर अस्पताल पुगेँ। खुट्टामा, पेटमा निलडाम बसेको थियो। औषधि गरेर घर फर्किए। आज तीन दिन भइसक्दा पनि अस्पताल जान सकेको छैन। आराम गरिरहेको छु ।
घटना लगत्तै सबै सहकर्मी जम्मा भएर ममाथि प्रहार गएको ठाउँमा जानु भयो । तर, त्यहाँबाट प्रहरी अन्तनै गइसकेका थिए। अस्पतालका मेसु चुमन लालदाससँग कुरा भयो । यहाँले विराटनगरका मेयर भीम पराजुली, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग कुरा गर्नु भयो। बुझ्दै जाँदा ममाथि लाठि प्रहार गर्ने प्रहरी मध्य बुधबार एक जनाको नाम थाहा पाएँ। उहाँ चाहिँ प्रहरी हवल्दार उमेश विक हुनुहुँदो रहेछ ।
हामिले दोषिमाथि कारबाहीको माग गरेका छौं । स्थानीय प्रशासनले छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले दोषिलाई कारबाहीमा हामी विश्वस्त छौं। दोषि कुनै हालतमा उम्किन पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ ।
स्वास्थ्य कर्मीले कहिले बिरामी त कहिले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबाट कुटाइ खाएको यो पहिलो घटना होइन। यस्ता घटनाले हाम्रो मनोबल गिराउने काम गरिरहेको छ। दोषिलाई चाडै कडा भन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने मेरो चाहना छ । बाटोमा खटिने प्रहरी सबैको सुरक्षाका लागि खटिने व्यक्ति हुन् । कुरा नै नसुनी लाठि प्रहार गर्नु एकदमै गलत कार्य हो। यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
यो घटनाले मलाई निकै मर्माहत तुल्याएको छ। मानिसले गल्ति गर्दा प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। बाटोमा ठूलै अपराधिमाथि आक्रमण गरेजस्तो गर्नु हुँदैन। र, त्यो अधिकार प्रहरीलाई छैन पनि ।
ममाथि कुटिएपछि विराटनगरमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार अस्पताल परिसरमा प्लाकार्डसहित कुटपिटको विरोधमा सहकर्मीहरू उत्रिनु भएको थियो। यस्ता घटनाले उहाँहरूमा पनि त्रास छाएको छ ।
Previous articleहस्तकला विकासका लागि सरकारले लिएको नीति सकारात्मक : हस्तकला महासङ्घ
Next articleसुनको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला ९५ हजार नजिक पुग्यो